Kwadwom 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
5 O Yehowa, kae nea aba yɛn so.+ Hwɛ, na hu yɛn ahohora.+ 2 Wɔadan yɛn agyapade ama ahɔho; wɔde yɛn afie ama ananafo.+ 3 Yɛayɛ nnyanka; yenni agya.+ Yɛn maamenom te sɛ akunafo.+ 4 Yɛn ankasa nsu a yɛnom, yetua ho ka.+ Nnyina a yɛsɔ, yɛtɔ. 5 Yɛn ataafo kura yɛn kɔn akyi.+ Yɛabrɛ, nanso yennya ahomegye.+ 6 Yɛde yɛn nsa+ ama Egypt;+ yɛde ama Asiria+ na ama yɛanya aduan adi amee. 7 Yɛn agyanom na wɔyɛɛ bɔne.+ Wonni hɔ, nanso yɛn na yɛasoa wɔn bɔne.+ 8 Nkoa na wodi yɛn so.+ Obi nni hɔ a obegye yɛn afi wɔn nsam.+ 9 Yɛde yɛn kra to yɛn nsam de hwehwɛ aduan,+ nkrante a ɛwɔ sare so no nti. 10 Yɛn were adɔ kɔɔ sɛ fononoo, ɔkɔm a ano yɛ hyew no nti.+ 11 Wɔabrɛ Sion mmea,+ Yuda nkurow mu mmaabun no ase. 12 Wɔkyekyeree mmapɔmma nsa sensɛn wɔn.+ Wɔanni nkwakoraa mpo anim ni.+ 13 Mmerante maa owiyammo so,+ na mmarimaa hintiwii bere a wɔsõsõ nnyina.+ 14 Mpanyimfo agyae kurow apon ano tena,+ na mmerante agyae wɔn sankudwom bɔ.+ 15 Yɛn komam ahurusi agyae. Yɛn asaw adan awerɛhow.+ 16 Yɛn abotiri ayi atɔ fam.+ Yennue, efisɛ yɛayɛ bɔne!+ 17 Eyi nti, yɛn koma yare.+ Eyi nyinaa nti, yɛn ani so ayɛ kusuu,+ 18 Sion bepɔw a ayɛ amamfõ nti;+ sakraman nenam so.+ 19 Na wo Yehowa de, wobɛtena w’ahengua so akosi daa.+ W’ahengua wɔ hɔ fi awo ntoatoaso so kosi awo ntoatoaso so.+ 20 Adɛn nti na wo werɛ afi yɛn daapem,+ na woagyaw yɛn nna pii yi?+ 21 O Yehowa, san fa yɛn bra+ wo nkyɛn, na yɛbɛsan aba dodo. Ma yɛn nna nyɛ foforo sɛ tete no.+ 22 Nanso woapo yɛn koraa.+ Wo bo afuw yɛn aboro so.+